Kyle Walker Oo Raaligelin Ka Bixiyay Fadeexadii Uu Ku Kacay & Man City - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kyle Walker Oo Raaligelin Ka Bixiyay Fadeexadii Uu Ku Kacay & Man...
Manchester City ayaa bilowday baaritaan ka dib markii Kyle Walker uu raaligelin ka bixiyay inuu la caweeyay dumar jirkooda ka ganacsada xilli ay aheyd inuu raaco amarka kooxda oo uu gurigiisa dhex joogo.
Daafaca England ayaa wajahaya ganaax culus ka dib markii wargeyska The Sun uu soo bandhigay maanta in Walker uu lacag siiyay labo dumar oo kuwa jirkooda ka ganacsada ah si uu u la caweeyo isaga iyo nin ay saaxiibo yihiin kaliya saacado ka dib markii uu taageerayaashiisa baraha bulshada ugu baaqay inay guryahooda joogaan oo ay raacaan talada shaqaalaha caafimaadka.
Warbixin uu soo saaray Walker oo 29 sanno jir ah ayuu ku yiri: “Waxaan doonayaa inaan uga faa’ideysto fursadaan inaan shacabka ka raaligeliyo falkii aan ku kacay isbuucii la soo dhaafay taasoo keentay in nolosheyda gaarka ah lagu soo qoro maanta wargeysyada.
“Waan fahamsanahay madaama aan ahay xirfadle kubada cagta ah inay i saaran tahay mas’uuliyad oo ay jiraan caruur igu dayaneysa. Sidaasi darteed waxaan doonayaa inaan raaligeliyo qoyskeyga, asxaabteyda, kooxdeyda, taageerayaasha iyo shacabka.
“Waxaa jira geesiyaal howl adag u qabanaya bulshada waqti xaadirkaan, waxaan isbuucii hore hoosta ka xariiqay shaqada cajiibka ah ay qabanayaan.
“Laakiin talaabadii aan qaaday waa mid ka duwan wixii ay aheyd inaan sameeyo mudada karantiilka. Waxaan doonayaa inaan ku celiyo fariinteydii hore: guryihiina jooga.”
Previous articleCiyaaryahano diidey inay dhimaan mushaarkooda
Next articleArsenal Oo Si Bilaash Ah Kula Wareegeysa Xiddig Premier League Wacdarro Ka Dhigay Xilli Ciyaareedkii Hore